ဓာတ်ပုံများ ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်သော Website များ - Bits Century
HomeTips & Tricksဓာတ်ပုံများ ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်သော Website များ
ကိုယ့်ရဲ့ Website တွေထဲမှာသုံးချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ တခြား platform တစ်ခုခု မှာသုံးချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ အရွယ်အစားကြီးမားသော ပုံတွေကို အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ Website လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
stocksnap ဟာပုံပေါင်းများစွာကို အခမဲ့ပေးသုံးနေတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်။Resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ လှပတဲ့ပုံပေါင်းများစွာကို အခမဲ့ရွေးချယ်နိုင်သလို ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလဲ categories အလိုက်ပြန်လည်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။
Website Link – https://stocksnap.io
ကိုယ်တိုင်လဲ ပုံလေးတွေတင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ unplash ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ website တစ်ခုပါ။အကောင့်ဖွင့်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လဲ ပုံတွေတင်ပေးနိုင်သလို တင်ပေးထားတဲ့ ပုံများကို ယူသုံးလို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ပုံပိုင်ရှင်ကို လဲ Donate လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
Website Link – https://unsplash.com
လက်ရာအမြောက်စားတွေနဲ့ သေသပ်လှပလွန်းတဲ့ portrait ၊ landscape ပုံမျိုးတွေကို သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ Freestock ကပုံတွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါ။
categories အရ ၇ ခုနဲ့ ပုံတွေအများကြီးမရှိပေမယ့် သူတို့တင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကတော့ မက်မောစရာလေးတွေပါ။
Website Link – https://freestocks.org
ပုံတင်မကပဲ illustration တွေ ၊ vectors ၊ videos ၊ music တွေပါ လိုချင်သပဆိုရင်တော့ pixabay ကသင့်အတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေမှာပါ။အရင်ဆုံးအသုံးမပြုမီ
သူတို့ရဲ့ License ကိုတော့ အရင်ဖတ်ရှုစေချင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ license ထဲမှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုအရာမျိုးဆိုရင် ခွင့်ပြုတယ်။ဘယ်လိုအရာမျိုးဆိုရင်တော့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့
Website Link – https://pixabay.com
Freepik.com ဟာဆိုရင် အခမဲ့ ရယူနိုင်တဲ့ ပုံတွေလဲရှိသလို Premium ပုံတွေလဲ ရှိပါတယ်။ Premium ပုံတွေမှာဆိုရင် ရွှေရောင် crown ပုံလေးပါဝင်ပြီး အဲ့လိုပုံတွေကိုမှ လိုချင်သပဆိုရင်တော့ Premium ကိုလစဉ် ၊ နှစ်စဉ် ဝယ်ယူအသုံးပြုလို့ရပါတယ် ။ Freepik မှာ portrait ၊ vector နဲ့ logo ကအစ အားလုံးတော်တော်များများရှိပါတယ်။
Premium ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Design Files ( Ps , Ai ) တွေပါရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Bits Century စီက clients တွေဆိုရင်တော့ Premium သုံးပေးပါတယ်။
Website Link – http://freepik.com
Website ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုသုံးသင့်လဲ ?
လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီမယ့် Website ?
Website များက လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုနေသလဲ ?